Xog: Is badal weyn oo laga filayo Gobalka Gedo | KEYDMEDIA ONLINE
Xog: Is badal weyn oo laga filayo Gobalka Gedo
Wararka ka imaanaya Gobalka Gedo ayaa sheegaya in Wasiirka Amniga Jubbaland Cabdirashiid Xasan Cabdinuur ‘Janan’ uu heshiis la gaaray Dowladda Fadaraalka.
Baled-Xaawo, Soomaaliya – Sida ay Keydmedia Online u sheegeen ilo xog-ogaal ah, Wasiirka Amniga Jubbaland Cabdirashiid Xasan Cabdinuur ‘Janan’ ayaa heshiis la gaaray Dowladda Soomaaliya, kaas oo ku qotoma in isaga iyo ciidamada uu hoggaamiyo u wareegaan dhanka Dowladda.
Cabdirashiid Janan, ayaa si xoogan kaga soo hor jeeday Dowladda waqtigu ka dhamaaday ee Farmaajo hoggaamiyo, wuxuuna dagaallo qaraar kula galay gobolka Gedo.
Wasiir Janan, wuxuu udub dhexaad u yahay xaaladda siyaasadeed ee ka taagan Gedo, is badal weyn ayaana dhici doona haddii Janan si buuxda ugu soo wareego Muqdisho.
Madaxda Maamulka Jubbaland ayaa wada dadaal xooggan oo ay ku doonayaan in ay ku fashiliyaan heshiiska labada dhinac.
Xiriirka Axmed Madoobe iyo Janan ayaa ahaa mid liita maalmihii la soo dhaafay, waxaya Madaxda Jubbaland isku dayayaan in Janan uu tago Nayroobi kadibna uu yimaado Kismaayo, si loo xalliyo madmadoga jira.
Dowladda Federaalka ee Soomaaliya ayaa bishii August 2019-kii, shaacisay inay xabsiga dhigtay Cabdirashiid Janan, iyadoo ku eedeysay in loo haysto dambiyo culus, hayeeshee, bilowgii Sebtembar 2019 ayaa la xaqiiyay inuu ka baxsaday xabsiga.
Arrintaan ayaa dhabar jab xooggan ku noqon doonta Axmed Madoobe iyo guud ahaan Maamulka Jubbaland oo si buuxda u weyn doona gacan ku heynta gobolka Gedo.
Keydmedia Online ayaa isku dayday in ay la xariirto Wasaaradda Warfaafinta ee Jubbaland, laakiin wali wax jawaab ah kama aysan helin.